के हो दुर्गेश थापा र गरिमा शर्माको सन्देश ? Canada Nepal
के हो दुर्गेश थापा र गरिमा शर्माको सन्देश ?
मोनीका सिंह आषाढ २५ २०७८
काठमाडौं । कलाकार समाजका ऐना हुन् । उनीहरुका हरेक गतिविधि समाजले नक्कल गर्छ । हरेक कपडाको फेसन अक्सर कलाकारबाट सुरु गरिन्छ । कलाकारले लगाएका लुगादेखि हेयर स्टाइलसम्म आममानिसले पछ्याउँछन् । उनीहरुले चढ्ने सवारी साधन पनि अरुको रोजाइ हुन्छ ।
कलाकारका हरेक गतिविधि समाजले पछ्याउने भएकाले उनीहरुलाई विभिन्न संस्थाहरुले ब्राण्ड एम्बास्डर बनाउने गर्छन्, निश्चित रकम तिरेर । यसर्थ कलाकार समाज ऐना हुन् । उनीहरुका हरेक गतिविधि समाजका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ । कलाकार तथा सार्वजनिक व्यक्तिको व्यक्तिगत जीवन पनि समाजले नियाल्ने गर्छ । यस कारण कलाकारहरु बोल्दा, हिँड्दा हरेक गतिविधिमा सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ ।
तर, अहिले नेपाली कलाक्षेत्र कुनै कुनै विषयले विवादमा आइरहेको छ । यो पक्कै पनि राम्रो होइन । कलाक्षेत्र बद्नाम भयो भने समाजलाई नै दूषित बनाउन सक्छ । जुन कलाकारले जस्तो कर्म गरेर विवादमा आएको हो उसका फ्यानहरुले सोही गतिविधि गर्ने सम्भावना अधिक हुन्छ । यस कारण कलाकार संयम, शालीन, सभ्य हुन आवश्यक छ । चलचित्र, नाटक, टेलिफिल्मसहित अभिनयमा उनीहरु पात्रअनुसार भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । तर, अरु बेला उनीहरु समाजमा गलत सन्देश जाने किसिमका गतिविधमा सहभागी हुनुहुँदैन ।
गएको धान दिवसमा गायक छत्र शाही र रेस्लर अस्मिता जुरेलीबीचको हिलो काण्ड सेलाउन नपाउँदै गायक दुर्गेश थापा र मोडल गरिमा शर्माबीचको टिकटक लाइभ प्रकरणले चर्चा पाइरहेको छ ।
खेलको रुपमा टिकटक लाइभमा उनीहरु अभिनय गर्नेक्रमम केही शब्दहरु पचाउन सकस पर्नेखालका बोलेका छन् ।टिकटक लाइभमा गायक थापासँग उदयमान मोडल गरिमाले आफ्नो पूर्वप्रेमीसँग भेट्दाको अभिनय गर्दै बोलेकी हुन्छिन् । तर, सोही क्रममा पूर्वप्रेमिको अभिनय गरेका गायक थापाले केही अपाच्य शब्द प्रयोग गर्छन् । यो उनीहरुको संवाद लाखौँ फलोअर्स भएको टिकटकबाट लाइभ भइरहेको थियो ।
लाखौं फलोअर्स भएको टिकटकबाट लाइभमा समाजमा नपच्ने शब्द प्रयोग गरेर जिस्कनु वा अभिनय गर्नु सामान्य मान्न सकिँदैन । जस कारण उनीहरु अहिले विवादमा परेका छन् ।
टिकटकबाट कलाक्षेत्रमा प्रवेश गरेकी गरिमाले टिकटकको महत्व र यसबाट हुने प्रभावबारे थाहा पाउनु पर्ने हो । तर, सामान्य रुपमा लिएर केही छाडा शब्द प्रयोग हुने गरी लाइभमा आएर जिस्कनु पक्कै पनि गरिमा, दुर्गेशको मात्रै होइन कलाक्षेत्रकै लागि दुखद् हो ।
उनीहरुको लाइभ भिडिओबाट १५ सेकेन्डको भिडिओ हालेर अहिले टिकटकमा भाइरल बनाइएको छ । सानो क्लिप्सले स्वयं गरिमा र दुर्गेशलाई विवादमा तानेको छ । कलाकारहरुको अभिनय गर्ने स्थान हुन्छ । तर, जहाँ सेन्सरकै प्रयोग नहुने, जेजस्तो बोल्यो हु बहु जाने लाइभमा आएर बोल्दा होस पुर्‍याउनु पर्ने थियो । तर, उनीहरु सावधान हुन सकेनन् । दुर्गेशले गरिमाथि प्रयोग गरिएका केही शब्द अपाच्य छन् ।
पूर्वप्रेमीको अभिनय गरेका दुर्गेशले आफूलाई छाडेर गएपछिको अवस्थालाई चित्रण गर्दै गरिमाको वास्तविक जीवनमै प्रभाव पार्ने खालका शब्द प्रयोग गरेका छन् ।
लाइभमा आएर कलाकारहरुले आममानिसलाई मनोरञ्जन दिनु, सचेत गराउनु, चेतना प्रवाह गर्नु र जिम्मेवार बनाउनु स्वभाविक हो । तर, पूर्व प्रेमी र प्रेमिका बनेर केही अपाच्य शब्द बोलेर गरिमा र दुर्गेशले समाजलाई दिन खोजेको सन्देश के हो ? यसबारे दुवै जनाले केही भनेका छैनन् । तर, विवादमा आएपछि उनीहरुले आफूहरुले जिस्किएको भनेका छन् । के कलाकारहरुले लाइभमा आएर परिवारका साथमा बसेर सुन्न नसकिने शब्द प्रयोग गरेर जिस्कनु सामान्य मान्न सकिन्छ ?
आषाढ २५, २०७८ शुक्रवार १७:२४:१५ बजे : प्रकाशित
# गरिमा शर्मा